A họpụtara Lu Weibing onye isi nchịkwa nke akara ngosi onwe ha Redmi | Gam akporosis
Xiaomi's Redmi ika bụ onye nweere onwe ya: Lu Weibing ka a họpụtara onye isi ya
Sapeta asịrị ahụ bụ eziokwu. Xiaomi kwuputara na Lu weibing, onye bụbu president nke Gionee, ga-abụ onye nweere onwe ya akara Redmi. Nke a ka o mere n'otu oge ahụ na Ihe ngosi RedN 7 bịara mara ya dị ka ama mbụ ya mgbe ọ nweere onwe ya.
Lu Weibing ga - arụ ọrụ dị ka Onye isi njikwa nke akara Redmi ọ bụrụla onye osote onye isi otu Xiaomi Group. Dị ka onye isi, ị ga-ahụ maka akara, imepụta ngwaahịa na ire ere maka akara Redmi, yana ngalaba ndị ọzọ. Weibing ga-akọrọ onye isi ala na onye nyocha na Xiaomi, Lin bin.
Kesa akara Redmi ga-abụ isi ihe ga - eme maka ụlọ ọrụ ahụ. Sọpụrụ, ụdị nke Huawei, na-eme nke ọma, anyị ahụla nkewa ndị ọzọ dịka POCO na Realme nwere ihe ịga nke ọma. Na usoro a, ịkesa akara Redmi nwere ezi uche. Agbanyeghị, ọ ga-atọ gị ụtọ ịhụ etu Lu Weibing si eduga aha na asọmpi a na ahịa zuru oke.
Lu Weibing kwụsịrị n'ọchịchị dị ka onye isi nke Gionee na 2017. Ọ nwere ahụmahụ karịrị afọ 20 na ụlọ ọrụ a. Gionee bụ onye ama ama ama ama na China. E hiwere ụlọ ọrụ a na 2002 na otu n’ime ndị na-emepụta ekwentị mkpanaaka na China niile, nke na-adịkwaghị ikpe. Etu ụlọ ọrụ ndị ọzọ kpuchiri ihe ịga nke ọma ya.
Ọ dịkwa mma ịmara na ọnụego òkè Xiaomi na Hong Kong Stock Exchange na-ada ada n'oge. Ọnụ ego adaala n'okpuru Hong Kong $ 10 n'oge ederede, na-anọchite anya ihe karịrị 40% si na ọnụahịa IPO ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Xiaomi's Redmi ika bụ onye nweere onwe ya: Lu Weibing ka a họpụtara onye isi ya
Redmi na-arụ ọrụ na ọkọlọtọ nke ihe karịrị euro 300
Facebook ozi na-ebupụta interface dị ọcha ma dị mfe